ဒီနေ့ မနက် – Thet Nandar
မနေ့ညက အမေရိကားမှာ ထွက်သွားတဲ့ Mega million ပေါက်သွားတဲ့ လူက … Maryland,
The Maryland Lottery said it soldawinning ticket ataretail store in Baltimore County. ..
ကိုယ် အမေရိကန် ထီ နဲ့တော့ အရမ်း .. အရမ်းကြီးကို … မရင်းနှီးသေးပေးမယ့် ထီတော့ ထိုးတယ်။ Mega က တစောင်ကို တဒေါ်လာ ကနေ စပီး ထိုးလို့ရတာလည်း ပါတယ်။
၅ ဒေါ်လာဖိုးလောက် ထီထိုးပါတယ် …
CT Lottery web site : http://www.ctlottery.org
2423 38 46 MB: 23 MP: 3
NOTE: Results shown below are for tickets sold ONLY IN CONNECTICUT. If the Mega Millions jackpot is won outside CT it will not be shown in the table below, and the jackpot will return to $12 Million.
105 $250,000 $1,000,000
804 + MB $10,000 $30,000
553 564$150 $450
582 773+ MB $150 $450
9,627 1,0582+ MB $10 $30
25,995 2,8403$7 $21
58,234 6,575 1 + MB $3 $9
109,003 12,4390+ MB $2 $6
Winning tickets sold in Connecticut: 204,003
Mega ball ( MB ) နံပါတ် တူမှ … MB : 23
အရှေ့က တလုံး .. 1 + MB = $ 3
၂ လုံး ကနေ စ ..2+ MB = $ 10
၅ လုံး တူရတာ ..5+ MB = Jackpot
Mega ball နံပါတ် မတူ ရင် .. အရှေ့က ၃ လုံးတူ ..3= $ 7
စင်ကာပူက toto .. 4D လိုမျိုးပဲ .. မှတ်မိသေးတယ်။ ၂၀၀၆ လောက်က .. ကိုယ့် Tue လား Thu လား မသိဘူး .. toto ထိုး တာ .. ( တခါ တလေလည်း နံပါတ် ရွှေးပီး ထိုးတယ် ) များသော အားဖြင့်က စက်ထဲက ထွက်လာတဲ့ နံပါတ်ပဲ ထိုးလိုက်တာပါပဲ .. ထီဖွင့်တဲ့နေ့ဆို … Starhurb ကနေ ပေါက်မဲ နံပါတ် message ပို့ပေးတယ် .. သတိရပါတယ် .. အဲဒီ အချိန်လေးတွေကို …
နောက်ဆက်တွဲ .. ထီပေါက်သူ ရဲ့ အကြောင်းလေးတွေ နဲ့ .. ထီမပေါက်သူတွေရဲ့ ပေါက်ကွဲသံတွေ .. FB ကနေ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ် …. 😀 … 😀 ..
ကိုယ် .. သီရိရတနာ ဘလော့မှာ .. အင်တာနက်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောပီးသွားပီလား ဟင် …
ပြောမယ်နော် .. ကိုယ့် .. အင်တာနက်ကို ကျေးဇူးတင်တယ် ..
ကိုယ့် မသိသေးတဲ့ အရာတွေကို အင်တာနက်ပေါ်ကနေ အလွယ်တကူ ရှာဖွေ .. သိရှိနိုင်သလို …
လူ သာ သေသွားတယ် .. သူ ထားခဲ့တဲ့ Sharing ခေတ်ကြီးထဲက သူ့ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ .. သူ့ရဲ့ နည်းပညာတွေ .. ဆရာစား မချန် ထားခဲ့တဲ့ စိတ် စေတနာ ကောင်းတဲ့ လူတွေကိုလည်း အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
ကိုယ့် .. အမေရိကားကို .. ဒယ်ဒီ အားကိုးနဲ့ … ဒီအတိုင်း .. ထ .. လာတာပါ ..
ဘာပြင်ဆင်မှုမှကို မရှိပါဘူး ..
တခု ခု ဆို .. Google ဖွင့် .. ရှာလိုက်တာပါပဲ ..
How to do .. or .. How to make က နေ အစ ချီပီး ရှာလိုက်တာ .. အားလုံး အဆင်ပြေလွန်းတာမို့ .. အင်တာနက်ကို အရမ်းသဘောကျတယ် ..
ကိုယ့် ကွန်ပြူတာမှာ .. ကလေးတွေလည်း သုံးပါတယ် .. window .. control panel မှာပဲ .. Parental control လုပ်ထားတာမို့ ကလေးတွေ အတွက်လည်း စိတ်ချရတယ် …
ဒီ အကြောင်းပြောပြတာ .. ကိုယ့် အင်တာနက်ကို တကယ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်း နှင့် အင်တာနက် သုံး တာ အကျိုးရှိကြောင်းလေး ကို ကိုယ့်ရဲ့ ရွှေမြန်မာက မိတ်ဆွေတွေကို ပြောပြတာပါ ..
( ချွင်းချက် ) သိပီးသူများ အတွက် မပါ … 😛
အခု ဆိုရင် FB .. အရမ်း အသုံးဝင်တယ် .. FB ကနေ တဆင့် အမေရိကားက လူတွေရဲ့ အကြောင်းတွေလည်း တော်တော်များများ သိလာတယ်။ အရင်တုန်းက FB က ဂိမ်းကစားဖို့ပဲ .. အခုတော့ သုံးတတ်ရင် တော်တော်လေးကို အကျိုးရှိမှန်းသိလာတယ် .. ကိုယ့် Friend list ထဲမှာ လူစုံတယ် ..
အသုံးများတာတော့ ဒီဘက် USA အကောင့်ကို အသုံးများပါတယ် .. အခု ရက်ပိုင်း စိတ်ဝင်စားနေတာက .. ကိုယ့် Friend list ထဲက ၂ယောက် .. လောက်က Mary Kay အလှကုန်ပစည်းတွေ ရောင်းတယ် .. FB ကနေ တဆင့် .. FB က အများကြီး အသုံးပြုလို့ရတာပဲနော် .. FB နဲ့ ဈေး .. ရောင်းတာ .. ၀ယ်တာ သိပ်တော့ မထူးဆန်းတော့ပါဘူး .. ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး .. အဲဒီ အကောင့်ကနေ Feed လေးတွေ တက်လာရင် သွားဖတ်နေတတ်တာကို ပြောတာပါ .. ကိုယ့်မှာ .. အမေရိကား အသိုင်းအ၀ိုင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မရှိတဲ့ အတွက် .. ကိုယ့် အဲဒါကို လိုက် မလုပ်ပါဘူး .. ဒီအတိုင်းပဲ .. စိတ်ဝင်စားလို့ .. သွား .. သွားပီး ဖတ်နေတာ ..
ရွှေမြန်မာမှာ .. အီးမေလ်း စ သုံးလို့ ရတဲ့ 2001 ခုနှစ်လောက်က ရုံးက system unit box ကို မ ပီး ဖုန်း ကျိုးတပ်တဲ့ ခေါင်းလေး ရှစ်မိုင်က တယ်လီဖုန်းရုံးမှာ သွားတတ်တာ မှတ်မိသေးတယ် .. အဲဒီ အချိန်တုန်းက ရွှေမြန်မာက ကွန်ပြူတာတွေမှာ တယ်လီဖုန်းတပ်တဲ့ ခေါင်း မရှိဘူး .. တယ်လီဖုန်း လိုင်းနဲ့ အီးမေလ်း သုံးရတာ .. အီးမေလ်းများ တစောင် ၂ စောင်လောက် ၀င်လာရင် ပျော်လိုက်တာ အရမ်းပဲ .. အခု အချိန်နဲ့များ ကွာပါ့ …. အခု ဆို အမှိုက်တွေ .. အမှိုက်တွေ ဆိုပီး .. အော်ရလောက်အောင် အီးမေလ်းတွေ များပါ့ .. Spam တွေ … 😀
Bagn net က ၂၀၀၄ လောက်လား ပဲ .. အဲဒီတော့မှ အင်တာနက် ရတာ .. ၂၀၀၆ တုန်းက ကိုယ့် အသုံးများတဲ့ Friendster .. Live.com လည်း ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိတော့ဘူး …
အဲဒီ Friendster မှာ ခင်ခဲ့တဲ့ ၁၀ ယောက် နီးပါးလောက်ပဲ . အခု ထက်ထိ FB မှာ ဆက်ခင်နေတုန်းပဲ .. ပြောင်းလဲမှု့ ခေတ် ရေစီးကြောင်းတွေပါ …
myspace a/c : http://www.myspace.com/thetnandar
အဲဒီ account က password မေ့နေ့လို့ .. ဘယ်လို သွား ပီး log in လုပ်ရမလဲး မသိဘူး ..
အမှန်က ဘယ် email နဲ့ myspace account လုပ်ထားမှန်း မမှတ်မိတော့တာ …
ကိုယ့် ကြုံခဲ့ဖူးတာလေးနဲ့ ပြောပြရရင် …
နောက် … တက်လာတဲ့ အရာတွေက အရင် .. အဟောင်းတွေထက် လက်စောင်းထက်တယ် …
ကိုယ် 2006 တုန်းက Myspace က အရမ်း နာမည်ကြီးတဲ့ social site ပါ ..
အခုတော့ FB က ပိုပီး နာမည်ကြီး လူကြိုက်များသွားသလို .. တော်တော်လေးလည်း သုံးလို့ ပိုကောင်းတယ် .. update ပိုမြန်တယ် …
နောက်ထပ်ပီး .. နောက်နှစ်တွေမှာ ဘာ social site က ကောင်းလာမလဲး မသိသေးဘူးပေါ့နော် ..
ဒီည မြန်မာ FB မှာ ရှိမည် ..
ဆုတောင်း ပြည့်ပါရစေ ….
ဒီနေ့ … မနက် အိပ်ရာက နိုးလာတော့ မိုးရွာနေသံ ကြားတယ်။ နောက်တော့ စနိုးတွေ ကျလာတယ်။ တနေ့ ည ကတည်းက စနိုးကျမယ် ဆိုတာ FB မှာ ဖတ်ပီးကတည်းက သိနေပါပီ .. စနိုး မကျတော့ .. April fool များ ရေးထားတာလား လို့ .. ဒီမနက် စနိုးလေးတွေ ကျမှ အော် .. သတင်း အမှန်မှန်း သိတော့တယ် .. အခု တော့ မိုးက ပါ ဆက်ရွာလိုက်လို့ စနိုးကျထားတာတွေလည်း အရည်ပျော်သွားပါပီ …
myspace password ပြန်ရသွားပီ ..
March 31, 2012 Thet Nandar